डा.केसीको समर्थनमा राजधानीमा जनप्रदर्शन भइरहेको छ । यो प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राजेन्द्र पाण्डे र बंशीधर मिश्रजस्ता सांसदहरु नै माफियाका सहयोगी भएपछि माफियालाई के गाली गर्नु भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत सहभागी भएको साउन २१ को जनप्रर्दनमा यस्तै आरोप लगाइयो । हुन पनि मनमोहन अधिकारीका नाममा खोलिएको मेडिकल कलेजलाई सहकारीमार्फत चलाउने सम्मको हर्कत यिनैले गरेका थिए । सरकारले सबै सम्पत्ति खरिद गरेर लिने सहमति भइसकेपछि पनि अझै यी दुईजना मेडिकल कलेज चलाउने प्रपञ्चमा लागिरहेका देखिन्छन् । एमालेका सांसदहरुले अन्य सांसदहरुको समेत लगानी लगाइरहेका छन् । मेडिकल कलेजका नाममा लुट मच्चाउने यिनको एकमात्र ध्येय रहेको सबैले बुझेका छन् ।
सांसदहरुले चिकित्सा क्षेत्रका माफियालाई सहयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सांसदहरुको आयस्रोत के हो ? तिनले के कति लगानी गरेका छन् ? यी सबै प्रश्नहरुमा विशेष छानबिनको मागसमेत जनस्तरबाट उठ्न थालेका छन् । जनप्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ– राजेन्द्र पाण्डे र बंशीधर मिश्र जस्ता व्यक्तिहरु संसदमा भएपछि माफियाले बिगारे भनेर अरुलाई गाली गर्नुको कुनै औचित्य नभएको डा जीवन क्षेत्रीलगायतले दावी गरेका छन ।
सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, क्रान्तिकारी माओवादी र अन्य संघसंस्थाको पनि समर्थन देखियो । यति हुँदा पनि सरकारले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माँगहरु संवोधन गर्ने छाँट देखाएन । कतै डा.गोविन्द केसीको मृत्यु पर्खेर बसेको त होइन ? यदि उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी देउवा सरकारले लिनुपर्छ र जनविद्रोहलाई सरकारले रोक्न सक्नेछैन ।
‘माफियाहरू देश घेर्दै, ६०१ के हेर्दै ?, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौं, सदाचारको सुरुवात गरौ’ ‘सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षामा पहुँच पाउनुपर्छ’, ‘भोकै बस्ने कसैलाई रहर छैन, सम्झौता गरेर ठग्न पाइँदैन’ यस्ता नाराले यतिबेला राजधानी सहर ढपक्कै ढाकेको छ, नारा घन्किरहेको छ । यी नारामा कतै पनि राजनीति छैन तर पाण्डे र मिश्रहरु यसमा राजनीति देखिरहेका छन् । यी सांसदहरुको आँखामा फुलो परेको छ कि के हो ? जाँच गर्न जरुरी देखिन्छ ।